Radio Siddhababa | Sabmbriddha Samaj Nirman ko Abhiyan …
रेडियो शिद्धबाबा ९८.४ मेगाहर्ज कार्यक्रम तालिका
१०. पाैष, २०७०
११. माघ, २०७०
ऐतिहासिक सिन्धुली गढी दरबार : - संरक्षणको पर्खाइमा सिन्धुलीगढी दरवार । नेपाललाई कब्जा गर्न आएका अंग्रेजहरुलाई पराजित गर्ने ऐतिहासिक स्थल सिन्धुलीगढी संरक्षण गर्न कसैको त्यती ध्यान पुगेको पाईदैन् । यस्ता महत्वपुर्ण स्थलहरुको संरक्षण गर्नु भन्दा पनि त्यहाँका भौतीक संरचनाहरु दिन प्रतिदिन चोरी निकासी हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन रहेको छ । संरक्षण गर्न सरोकारवाला निकायहरु अग्रसर हुनु पर्ने समय आएको छ । तस्विर : – यम चौलागाई/शिद्धबाबा More »
सामुदायिक रेडियो शिद्धबाबा ९८.४ मेगाहर्जको टावर You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »
साग वेच्न सिन्धुलीमाढी ल्याउदै : - सिन्धुलस्को ग्रामिण भेगबाट साग वेच्न ल्याउदै महिलाहरु । किसानहरु गाउँमा सडक नपुग्दा उत्पादन गरिएको साग सिन्धुलीमाढीमा ल्याएर वेच्न बाध्य छन् । ग्रामिण क्षेत्रका किसानहरु यसरी तरकारी ब्यापार गरेर दैनिक जीविका चलाउदै आएका छन् । तस्विर : - नविनबाबु अधिकारी / शिद्धबाबा । More »
ग्रामिण सडक : सिन्धुलीको ऐतिहासिक स्थल सिन्धुलीगढी हुँदै जलकन्या र मझुवा गाविसमा जाने सवारी साधन । त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताहरु जोखिमपुर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । साधुँरो सडकमा यात्रुको चाँपले गर्दा जुनसुकै समयमा पनि दुर्घटना हुनसक्ने जोखिम भए पनि संम्बन्धित निकायको भने ध्यान पुग्न सकेको छैन । साधुँरो सडकमा यसरी जोखिममा यात्रा गर्न बाध्य ग्रामिण भेगका सर्वसाधारणहरुको यथार्थ खै कस्ले बुझ्ने । तस्विर : नविनबाबु अधिकारी/ शिद्धबाबा । More »
लोप हुँदै अलैची : - सिन्धुलीको ग्रामिण गाविसमा लगाईएको अलैची । अलैची खेतीवाट हरेक बर्ष लाखौ लाख आम्दानी लिन सकिने भएपनि यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । जिल्लाको महाभारत क्षेत्रका सवै गाविस अर्थात ओसिलो उत्तरी मोडा भएको जमीनहरुमा अलैचि खेती गर्न सकिने कृषि प्राविधिकहरुको भनाईछ । तस्विर : नविनबाबु अधिकारी / शिद्धबाबा More »
सिन्धुलीको जुनार :- जुनारको राजधानी भनेर सिन्धुलीलाई चिनिन्छ । सिन्धुलीका ५३ गाविस मध्य ४ गाविस जुनार उत्पादनकालागि मुख्य क्षेत्र मानिन्छ । सिन्धुलीका अन्य ४० भन्दा बढी गाविसमा जुनार उत्पादनको सम्भावना रहेको छ । जुनार ब्यबसाय बाट सिन्धुलीका किसानले बार्षिक न्युनतम ५० हजार देखि २ लाख ५० हजार सम्म आय आर्जन गर्ने गर्दछन् ।
No comments अखिलको जिल्ला अध्यक्षमा बराल
नबिनबाबु अधिकारी सिन्धुली, बैशाख ७ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सिन्धुलीको १३ औं जिल्ला सम्मलेन शनिवार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनबाट दिपेस बरालको अध्यक्षतामा ३१ सदसिय नया कार्यसमिति सर्वसहमति प्रक्रियावाट चयन गरिएको छ । जसमा उपाध्यक्षमा गोकर्ण भुजेल, बाँकी पढ्नुहोस
No comments रक्तदान कार्यक्रम
नबिनबाबु अधिकारी सिन्धुली, बैशाख ७ । नेपाल विद्यार्थी संघ सिन्धुलीले आफ्नो ४४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा शनिवार सिन्धुलीमाढीमा रक्तदान कार्यक्रमको आयेजना गरेको छ । नेपाल विद्यार्थी संध सिन्धुलीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा १ सय ५ जनाले रक्तदान गरेका छन् । रक्तदान बाँकी पढ्नुहोस
No comments आगलागि पिडितका लागि युवा संघ सिन्धुलीद्धारा राहत संकलन
नबिनबाबु अधिकारी सिन्धुली बैशाख ४ । सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएको आगोलागिबाट क्षती पुगेका आगलागि पिडितहरुका लागि युवा संघ सिन्धुलीले राहत संकलन गरेको छ । युवासंघ सिन्धुलीको आयोजनामा भएको राहत संकलन कार्यक्रमबाट २८ हजार ५ सय ३५ रुपैंया अन्य जिन्सि बाँकी पढ्नुहोस
No comments टाटा सुमो दुर्घटना ४ घाईते
नबिनबाबु अधिकारी सिन्धुली, बैशाख ३ । सिन्धुलीको मुलकोटमा टाटा सुमो दुर्घटना हुँदा ४ जना घाईते भएका छन् । कण्माण्डौ बाट खोटाङको हलेसि तर्फ जानै गरेको ना १ ज ४३५३ नम्बरको टाटा सुमो दुर्घटना हुदा ४ जना सामान्य घाईते भएको जिल्ला बाँकी पढ्नुहोस
No comments आगलागीका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै
पुर्णप्रसाद न्यौपाने ओखलढुङगा, बैशाख २ । ओखलढुंगामा आगलागीका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो समय जिल्लाका अधिकांश सामुदायीक वन क्षेत्र र घरहरु आगलागीबाट जलेर नष्ट हुनेक्रम बढेपछि आगलागीका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाईएको हो । पछिल्लो बाँकी पढ्नुहोस
No comments मारेको चरा पोलेर खान खोज्दा धन जनको क्षती
नबिनबाबु अधिकारी सिन्धुली, बैशाख २ । सिन्धुलीको महादेव स्थान गाँउ विकास समिति वडा नम्बर ७ मा बालबालीकाले मारेको चरा पोलेर खान खोज्दा आगलागि भएको छ । आगालागि बाट स्थानीय ७० बर्षिय वीर वहादुर थामीको आगोले जलेर ज्यान गएको छ । बाँकी पढ्नुहोस
No comments रेडियो शिद्धबाबाको नवबर्ष आगमन साँझ २०७१
नबिनबाबु अधिकारी सिन्धुली, चैत ३० । रेडियो शिद्धबाबा ९८ दशमलव ४ मेगाहर्जले भोली भब्यताका साथ नव बर्ष २०७१ लाई स्वागत गर्दैछ । हरेक बर्ष झै यस बर्ष पनि रेडियो शिद्धबाबाले रेडियोका स्रोता, शुभचिन्तक तथा सर्वसाधारण संग खुसि साटा साट गरी बाँकी पढ्नुहोस
No comments सिन्धुलीमा सवारी कारवाहीबाट ५ लाख भन्दा बढी राजस्व संकलन
नबिनबाबु अधिकारी सिन्धुली, चैत ३० । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले यस आर्थिक बर्षको आज सम्मको सवारी साधन कारवाही र राजस्व संकलन सार्वजनिक गरेको छ । यस आर्थिक बर्षको सुरुवात देखी आज सम्म २ लाख ४ हजार ८१ सवारी साधन बाँकी पढ्नुहोस
No comments नया बर्ष २०७१ को रौनक
रमेश बर्नवाल बाँके, चैत ३० । नया बष मनाइर्दै नया बर्षको स्रुवात संगै शुभकमना आदन प्रदान कार्यक्रमले बाँके लगाएत देशभरनै ब्यपकता पाएको छ । नया बर्ष २०७१ को अगमान र २०७० को बिदाइ गर्दै नया बर्षमा शुभकमना आदन प्रदान गर्ने बाँकी पढ्नुहोस
No comments भिमेश्वर – ३ राईगाउमा १३ घर जलेर नष्ट,१ करोड बराबरको धनमाल जलेर नष्ट
नबिनबाबु अधिकारी / शिद्धबाबा सिन्धुली, चैत २८ । सिन्धुलीको भिमेश्वर गाविस वडा नं ३ राईटोलमा जंगलको डडेलोे मानव वस्तिमा प्रवेस गर्दा १३ घर जलेर नष्ट भएको छ । यस्तै आगलागि बाट ४ गोठ पुर्ण रुपमा नष्ट र २ घरमा आंशिक बाँकी पढ्नुहोस
April , 2014 - अखिलको जिल्ला अध्यक्षमा बराल
April , 2014 - रक्तदान कार्यक्रम April , 2014 - आगलागि पिडितका लागि युवा संघ सिन्धुलीद्धारा राहत संकलन
अहिले प्रसारण भइरहेको Recent Posts
अखिलको जिल्ला अध्यक्षमा बराल 10:47 am By Admin नबिनबाबु अधिकारी सिन्धुली, बैशाख ७ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सिन्धुलीको १३ औं जिल्ला सम्मलेन शनिवार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनबाट दिपेस बरालको अध्यक्षतामा Read More » रक्तदान कार्यक्रम 10:30 am By Admin नबिनबाबु अधिकारी सिन्धुली, बैशाख ७ । नेपाल विद्यार्थी संघ सिन्धुलीले आफ्नो ४४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा शनिवार सिन्धुलीमाढीमा रक्तदान कार्यक्रमको आयेजना गरेको छ । नेपाल विद्यार्थी Read More » आगलागि पिडितका लागि युवा संघ सिन्धुलीद्धारा राहत संकलन 5:26 pm By Admin नबिनबाबु अधिकारी सिन्धुली बैशाख ४ । सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएको आगोलागिबाट क्षती पुगेका आगलागि पिडितहरुका लागि युवा संघ सिन्धुलीले राहत संकलन गरेको छ । युवासंघ Read More » टाटा सुमो दुर्घटना ४ घाईते 12:51 pm By Admin नबिनबाबु अधिकारी सिन्धुली, बैशाख ३ । सिन्धुलीको मुलकोटमा टाटा सुमो दुर्घटना हुँदा ४ जना घाईते भएका छन् । कण्माण्डौ बाट खोटाङको हलेसि तर्फ जानै गरेको ना Read More » आगलागीका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै 6:21 pm By Admin पुर्णप्रसाद न्यौपाने ओखलढुङगा, बैशाख २ । ओखलढुंगामा आगलागीका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो समय जिल्लाका अधिकांश सामुदायीक वन क्षेत्र र घरहरु आगलागीबाट Read More » Admin: this is goood » आर्काईभ्स	April 2014
लाईभ रेडियो	स्टाफ प्रोफाईल	फोटो ग्यालरी
फेसबुक Contact	Radio Siddhababa 98.4 Mhz Sambriddha Samaj Nirman Ko Abhiyan Kamalamai Municipality-09 Sanchar Tower, Mallagaon, Sindhuli Tel : +977-47-520634, 520103 E-mail : radiosiddhababa@gmail.com info@siddhababasanchar.org
© 2014 Radio Siddhababa Powered by WordPress | Theme Designed by: Hotel and parking | Thanks to Airport, Midlands hotels and Free parking